လူကိုမြိုနေ တဲ့ တောကြီးမြွေကြီးကို ဖမ်းဆီး နေတဲ့ ပရဟိတမြွေဖမ်းသမားများ(ရုပ်/သံ) – Zartiman
မြန်မာနိုင်ငံ ကျေးလက်နေ ပြည်သူများ ၊ တောမုဆိုးများ တို့သည်လည်း တောကြီးမြွေဟောက်တို့ကို အကြိမ်များစွာတွေ့ဖူးကြောင်း သိရ သည် ။တောကြီးမြွေ ဟောက် သည် မြွေ ဟောက်များ အားလုံးတွင်သာမက အဆိပ်ရှိမြွေတို့ အားလုံးတွင် အရှည်ဆုံးမြွေများ ဖြစ်ကြ၏ ။ ၁၈. ၅ ပေ – ၁၈ . ၈ ပေခန့်အထိရှိနိုင်ကြောင်းသိရသည် ။
သဘာဝသားကောင်များတွင် ကြွက်များ ၊ နို့တိုက်သတ္တဝါငယ်များ ၊ တွားတွားသတ္တဝါ ငယ် များနှင့် တစ်ခြားမြွေ များပင် ပါဝင် သဖြင့် မြွေဘုရင်ဟု ခေါ်ဟန်တူသည် ။၎င်းသည် တစ်စုံတစ်ရာသောလူ / တိရိစ္ဆန် ကြောင့် စိတ်အနှောက် အယှက် ဖြစ်ပြီးထိတ်လန့်၍ သော် လည်းကောင်း ၊ မိမိ၏ အသက်အန္တာရယ် ရှိသည် ယူဆပြီး ကာကွယ်သောအားဖြင့်လည်းကောင်း ၊
မိမိ နေထိုင်ရာ အသိုက်အမြုံ သို့ ဝင်လာသော လူ /တိရိစ္ဆန်တို့ကို လည်းကောင်း ရန်မူတိုက်ခိုက်တတ်သည် ။ခန္ဓာကိုယ် ၏ သုံးပုံတစ်ပုံ အလျှားခန့်အထိပင် ပါးပြင်းထောင်နိုင်ကြပြီး အလွန်အဆိပ်ပြင်းသောမြွေကြီးဖြစ်သည် ။အိန္ဒိယ နှင့် အရှေ့တောင် အာရှ သစ်တောကြီး များတွင် တွေ့နိုင်သည် ။
လူကိုမွိုနေ တဲ့ တောကွီးမွှကွေီးကို ဖမျးဆီး နတေဲ့ ပရဟိတမွှဖေမျးသမားမြား(ရုပျ/သံ)
မွနျမာနိုငျငံ ကြေးလကျနေ ပွညျသူမြား ၊ တောမုဆိုးမြား တို့သညျလညျး တောကွီးမွှဟေောကျတို့ကို အကွိမျမြားစှာတှဖေူ့းကွောငျး သိရ သညျ ။တောကွီးမွှေ ဟောကျ သညျ မွှေ ဟောကျမြား အားလုံးတှငျသာမက အဆိပျရှိမွှတေို့ အားလုံးတှငျ အရှညျဆုံးမွှမြေား ဖွဈကွ၏ ။ ၁၈. ၅ ပေ – ၁၈ . ၈ ပခေနျ့အထိရှိနိုငျကွောငျးသိရသညျ ။
သဘာဝသားကောငျမြားတှငျ ကွှကျမြား ၊ နို့တိုကျသတ်တဝါငယျမြား ၊ တှားတှားသတ်တဝါ ငယျ မြားနှငျ့ တဈခွားမွှေ မြားပငျ ပါဝငျ သဖွငျ့ မွှဘေုရငျဟု ချေါဟနျတူသညျ ။၎င်းငျးသညျ တဈစုံတဈရာသောလူ / တိရိစ်ဆနျ ကွောငျ့ စိတျအနှောကျ အယှကျ ဖွဈပွီးထိတျလနျ့၍ သျော လညျးကောငျး ၊ မိမိ၏ အသကျအန်တာရယျ ရှိသညျ ယူဆပွီး ကာကှယျသောအားဖွငျ့လညျးကောငျး ၊
မိမိ နထေိုငျရာ အသိုကျအမွုံ သို့ ဝငျလာသော လူ /တိရိစ်ဆနျတို့ကို လညျးကောငျး ရနျမူတိုကျခိုကျတတျသညျ ။ခန်ဓာကိုယျ ၏ သုံးပုံတဈပုံ အလြှားခနျ့အထိပငျ ပါးပွငျးထောငျနိုငျကွပွီး အလှနျအဆိပျပွငျးသောမွှကွေီးဖွဈသညျ ။အိန်ဒိယ နှငျ့ အရှတေ့ောငျ အာရှ သဈတောကွီး မြားတှငျ တှနေို့ငျသညျ ။